PressReader - Isolezwe: 2018-09-14 - Sekusothini ngowezimoto eMsinga
Sekusothini ngowezimoto eMsinga
Isolezwe - 2018-09-14 - EZEZIMOTO - FANELESIBONGE BENGU
AYAQALA ukudayisa ngoLwesihlanu oluzayo amathikithi omcimbi wezimoto iMsinga Driftkhana ezoba seMphelankani, eMsinga kusukela ngoSepthemba 21 kuze kube wuSepthemba 23.
Umsunguli walo mcimbi, uMnuz Smanga Mabaso, uthe ngokujwayelekile amathikithi adayisa ngosuku lomcimbi kodwa kulokhu bawadayise kuqala ukuze bagweme isiminyaminya.
“Kusukela ngoLwesihlanu azotholakala khona eMphelankani naseSpar eMsinga. Sifuna ukuthi asheshe abe ngakubo abantu ukuze bangaphoxeki ngakusasa ngoba isasasa likhulu, azophela,” kusho uMabaso.
Uthe abiza uR200, iVIP ibe nguR700 kuthi iVVIP ibe nguR1 700. Le mali ngeyamathikithi empelasonto yonke. Awukwazi ukuthola awosuku olulodwa ngokusho kukaMabaso.
Kulo mcimbi kuzobe kuboshelwe abashayeli okubalwa kubo u-Austin, Bad Company, Eddie Boy, Magesh, Eddie Rasta, Team Numbi, Skhotheni nabanye abazobe beshaya izidudla bechusha nasemapalini imoto ihamba ngohlangothi.
Kulo nyaka kuzobe kungokwesikhombisa kwenziwa lo mdlalo.
UMabaso uthe nezindawo zokulala seziqala ukuncipha ngenxa yokuthi kuzobe kutheleke abantu bangaphandle. Uthe lokhu kungenxa yokuthi kade behambele ezindaweni okubalwa kuzo eSwatini, Eastern Cape naseGoli benxenxa abantu ukuthi bahambele umcimbi.
“Abanye bashayela eSiqalo Court bese siyabatshela ngezindawo ezingomakhelwane abangalala kuzo. Okuhle wukuthi bazopaka izimoto zabo ezindaweni eziphephile bese siyabathutha mahhala. Asifuni bashayele emgwaqweni abangawujwayele ebusuku, bekhathele noma bephuzile.”
Uthe umcimbi uzoqala ngepre-party ngoLwesihlanu okuzobe kunandisa kuyo osomahlaya oFelix Hlophe noDJ. Ngakusasa ngemuva komcimbi kuzoba ne-after party okunandisa kuyo uDladla Mshunqisi, Tipcee, Sphectacula noNaves nabanye. NgeSonto kune-after party okudlala kuyo uDJ Le Soul, Vumar nabanye.
ABAHLELI beMsinga Driftkhana uMnuz Smanga Mabaso noMnuz Arthur Mbhele